Isku xirnaansho: Ka Faa'iideyso Shabakaddaada Si Aad Ugu Xidho Macaamil Dheeraad Ah Madal Sirdoonka Xiriirka Iyo Falanqaynta | Martech Zone
Iskucelceliska maaraynta xiriirka macaamiisha (CRM) xalku waa madal qurxoon oo stat keyd ah iskuxirka, howlahooda, iyo; laga yaabee, qaar ka mid noqosho nidaamyo kale oo bixiya aragti dheeri ah ama fursado suuqgeyn ah. Isla mar ahaantaana, xiriir kasta oo ku jira keydka macluumaadkaaga wuxuu leeyahay xiriir adag oo saameyn ku leh macaamiisha kale iyo kuwa go'aanka gaara. Kordhinta shabakadan lama furin, in kastoo.
Waa maxay Sirdoonka Xiriirka?
Tiknoolajiyada sirdoonka xiriirka waxay falanqeeyaan xogta xiriirka ee kooxdaada waxayna si toos ah u abuuraan garaafka xiriirka ee loo baahan yahay si loo gaaro mudnaanta ganacsiga. Jaantuska xiriirka wuxuu soo bandhigayaa aragti guud oo ku saabsan cidda kooxdaadu taqaanno iyo sida ay u garanayaan iyaga, taasoo ku tusinaysa waddooyinka ugu wanaagsan ee isbarasho ama gudbin.
Waa maxay sababta Suuqgeyntu Ku saleysan Xisaabinta iyo Sirdoonka Xiriirka ay u tahay Midow Dhamaystiran
Affinity waa sida isku dhafka LinkedIn iyo Salesforce, oo kaliya oo leh Sirdoonka Artifishalka ah si loo fahmo xoogga xiriirka (ka duwan LI) iyo qalabka otomaatiga si xanuunka looga saaro maareynta CRM. Qaab dhismeedka tiknoolajiyada ee shirkadda iyo falanqaynta in ka badan hal bilyan oo xog ah oo ku saabsan emayllada, jadwalka taariikhda, iyo ilaha saddexaad si loogu soo bandhigo dadka isticmaala aaladaha ay ugu baahan yihiin inay si otomaatig ah u maareeyaan xiriirradooda ugu qiimaha badan, mudnaanta u siiso isku xirnaanta muhiimka ah, iyo inay soo helaan fursado aan la helin.
Affinity wuxuu si toos ah uqabtaa isdhexgal kasta kooxdaadu waxay la leedahay xiriir ama urur. Waxay sidoo kale ku kobcineysaa xog kasta oo leh faahfaahinta xiriirka muhiimka ah ee laga yaabo inaan lagu darin ilaha xogta dhinac saddexaad sida Crunchbase, Clearbit, iyo macluumaadkaaga gaarka ah ee macluumaadka.
Affinity dib-u-socodsiin wuxuu abuuraa Rolodex dalwad ah dhammaan shirkadaha iyo dadka kooxdaadu la falgashay oo ku cusbooneysiisay waqtiga-dhabta ah.
Isbahaysiga Affinity ayaa kuu oggolaanaya xiriiri kuwa kale ee ka baxsan kooxdaada si loo fahmo cida shabakadaada ku siin karta isbarashada ugu qiimaha badan.
Falanqaynta Affinity waa aalad u gaar ah, waqtiga dhabta ah ee warbixin siinta ee bixisa aragtiyo warshadeed marka ugu horeysa ee xiriirka kooxda dibadeed iyo sida isdhexgalka ay u saameeyaan qulqulka heshiiska shirkadda, dhuumaha, howlaha isku xirka, iyo tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah. Hadda waxaa laga heli karaa is dhexgalka sirdoonka ganacsiga iyo gorfaynta barnaamijka Google Cloud, Fiiri, Falanqaynta Affinity waxay u timaadaa sidii qayb isku dhafan oo ah noocyada 'Premium' iyo 'Enterprise' ee madal Affinity ama casriyayn loogu talagalay macaamiisha Xirfadlayaasha ah.
Falanqaynta Affinity waxay ku dhisan tahay xogta aasaasiga ah barxadda sirdoonka xiriirka Affinity si ay u siiso aragti qoto dheer xogta kooxda CRM. In kasta oo inta badan barnaamijyada CRM ay bixiyaan oo keliya aasaasiga, awoodaha warbixinnada aasaasiga ah, Falanqaynta Affinity waxay bixisaa dashboodyo si dhammaystiran loo qaabeyn karo iyo warbixinno dhab ah, si waqtiga dhabta ah looga caawiyo shirkadaha inay sameeyaan falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan isbeddellada iyo wadayaasha waxqabadka ee saameeya howlaha ganacsiga muhiimka ah.
In ka badan 20 warbixinno muuqaal ah ayaa laga heli karaa liis kasta oo ka mid ah barxadda sirdoonka xiriirka Affinity. Dhammaan warbixinnada ayaa si qoto dheer loogu qodbi karaa iyada oo ku saleysan qaybaha caadada u ah sida warshadaha toosan, nooca shirkadda, cabirka shirkadda, iyo arrimo kale. Isticmaalayaasha ayaa si fudud u dhoofin kara ama u diri kara warbixin kasta si ay ula wadaagaan daneeyayaasha muhiimka ah.
Xogta oo si buuxda u muuqan ayaa siineysa shirkadaha si muuqata waqtiga dhabta ah ee waxqabadka kooxdooda waxayna awood u siineysaa inay ku darsamaan xogta si ay ugu soo baxaan jawaabaha su'aalaha ku saabsan halka iyo sida loo maalgeliyo dadaalka kooxdooda iyo diiradda. In kasta oo ganacsiyada ay ku dhisi karaan tiro kasta oo warbixinno la habeyn karo oo la socota Falanqaynta Affinity, laba ka mid ah warbixinnada horay loo sii baakadeeyay waxaa ka mid ah:
Falanqaynta funnel: Waxay awood u siineysaa shirkadaha inay la socdaan waxqabadka dhuumahooda iyagoo falanqeynaya marxalad kasta oo hawsha heshiiska ah, oo ay ku jiraan sicirka u beddelashada marxalad kasta, celceliska waqtiga heshiisyadu ku sii jiraan marxalad kasta, waxqabadka ugu dambeeya ka hor intaan heshiisyada la guuleysan ama lumin, halkaasoo heshiisyada ugu fiican ay yihiin laga helay, iyo inbadan.
Warbixinta Waxqabadka Kooxda: Waxay bixisaa falanqeyn ku saabsan e-mayl kooxeed, wicitaanno, shirar iyo dhaqdhaqaaqyo kale, oo ay burburiyeen warshadaha, gobolka, iyo in ka badan, si loo siiyo aragti muhiim ah oo ku saabsan waxqabadka kooxda iyo guusha ama cilladaha ku saabsan isdhexgalka ay la leeyihiin rajada ama xiriirada.
Barmaamijka 'Affinity platform' wuxuu ka caawiyaa isticmaalayaasha inay maareeyaan xiriirka ka dhexeeya 30 milyan oo qof iyo 7 milyan oo urur. Iyadoo la adeegsanayo 'Affinity Analytics', isticmaaleyaashu hadda waxay leeyihiin aragti dheeri ah oo ku saabsan isdhexgalka ay la leeyihiin xiriirada dibadda iyo sida howlahaas loogu hagaajin karo si loo wanaajiyo heshiiska iyo maaraynta dhuumaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan isku xirnaanta Akhri Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Falanqaynta Affinity
Tags: jacaylfalanqaynta affinityaisirdoonka macmalCRMxogta crmmaamulka xiriirka macaamiishafalanqaynta funneleegsirdoonka xiriirkamadal sirdoonka xiriirkawaxqabadka kooxda iibka
Visme: Aalad Awood ah oo loogu talagalay Abuurista Mawduuc Muuqaal Cajiib ah